I-AgriTourism - Ukuvakasha Komndeni | I-Seymour, IN | Isikhungo Sokuvakasha SaseJackson County
Lolu hambo lokuziqondisa lokushayela luyisipho “emapulazini aphilayo” nakubantu abenza babe ngenye yezimpahla ezibaluleke kakhulu esifundeni sethu. Uzothola konke kusuka emsebenzini wokulima wanamuhla kuya epulazini lomndeni elincane lakudala. Kuzoba nezilwane eziningi ezizobhekwa emapulazini nasendaweni yazo yemvelo. Amanye ama-vistas amahle kakhulu nokushayela kuyatholakala kule ngxenye yeJackson County.
Uhambo lungaqedwa emahoreni ambalwa noma kungathatha cishe isigamu sosuku, kuya ngezintshisekelo zakho nokuthi ufuna ukuvakashela isikhathi esingakanani.
Chofoza lapha ukulanda imininingwane yokuvakasha kokushayela
Imakethe yaseStuckwish Farm
Ipulazi lomndeni linomlando omude eJackson County futhi lisendaweni eyi-7 miles ukusuka eBrownstown ku-State Road 135. Vakashela imakethe yethu ukujabulela yonke imikhiqizo yethu yasendaweni entsha ngesikhathi sokuvuna. Siziqhenya kakhulu ngokunikela ngomkhiqizo omusha sha futhi omuhle kakhulu wetafula lomndeni wakho. Kusuka ekukhiqizweni okusha, okukhuliswa endaweni kuya kuzinyosi lendawo kanye nezinsini, sikufakile. Siphatha nezinto zobuciko zasendaweni nezinto zokuhlobisa ekhaya ezivela emphakathini wethu. Yima uvakashele nathi futhi ujabulele ukuthi iJackson County, Indiana imayelana nani.
Chofoza lapha ukuvakashela iwebhusayithi!
Imakethe yeHackman Family Farm Market
6077 S. State Road 135, Vallonia, 812-358-3377, Entwasahlobo kuze kube yihlobo.
Ingqikithi yemakethe epulazini yomndeni, enikeza konke umuntu angakulindela emakethe yepulazi eseceleni komgwaqo. Ummbila, amathanga, utamatisi, ubhontshisi obuluhlaza, i-cantaloupe ngisho noju olukhiqizwe kuleli luyatholakala emakethe, olusetshenziswa yizizukulwane zomndeni nabakwaHackman. Kutholakala phakathi kweVallonia neSalem, imakethe yepulazi ingamakhilomitha ayi-10 ukusuka eBrownstown kepha ikufanele ukushayela.
Imakethe Yepulazi LaseTiemeyer
Idume ngokuhlala isikhathi eside kanye nonyaka kuzo zonke izinkathi zonyaka, izinhlobo ezahlukahlukene zamathanga, amathanga nesikwashi kanye nemakethe yangaphakathi enezithelo, imifino, uswidi, amajeli kanye nokuningi okunzima ukuthola izinto. Indawo yokudlela egcwele ihlinzeka izivakashi futhi inikela ngebhulakufesi, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa kanye ne-pizza! Imakethe inikela ngokuthize kuwo wonke umuntu, kusuka kumapentshisi nesikwashi sasehlobo kuya kuma-zucchini, utamatisi, amakhabe namathanga namathanga. Kukhona ngisho ne-zoo encane yokuphulula kanye nenkundla yegalofu encane. Izihlahla zikaKhisimusi ezisikiwe nezimbali ezintsha ezinikelwe amaholide.
Imakethe Yomlimi WaseSeymour
I-Walnut Street Park Lot, iSeymour, ngoMeyi kuya ku-Okthoba
Ukukhiqiza nezimpahla zazo zonke izinhlobo zamukelekile ezimakethe zomlimi ezithile zonyaka osenkabeni yedolobha iSeymour. “IMarketLite” ibanjwa kusukela ngehora lesibili ntambama kuya kwelesi-2 ntambama ngoMsombuluko nango-6 ekuseni kuze kube semini ngoLwesithathu kusuka entwasahlobo kuya ekwindla nango-8 ekuseni kuya emini ngoMgqibelo ngo-Okthoba. Imakethe ephelele izobanjwa kusukela ngo-8 ekuseni kuze kube semini, ngoMeyi kuze kube nguSepthemba. UMgqibelo wesi-8 enyangeni ngayinye, ngoJuni kuya kuSepthemba, uzoba ngoMgqibelo okhethekile wemakethe ngemiboniso yokupheka, imisebenzi yezingane, umculo nokuningi.
Imakethe yaseBrownstown Ewing Main St. Farmer
I-Heritage Park, eduze kwenkantolo yesifunda, ngoJuni kuya ku-Okthoba
Imikhiqizo nezimpahla zamukelekile esigcawini senkantolo eBrownstown. Imakethe ibanjwa njalo ngoLwesihlanu kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-1 ntambama kusuka ngoJuni kuya ku-Okthoba.
Imakethe Yomlimi waseCrothersville
U-101 West Howard Street
Umkhiqizo nezimpahla wamukelekile. Imakethe ibanjwa njalo ngoMgqibelo kusukela ngo-9 ekuseni kuze kube semini. Shayela ku-812-390-8217.
5875 E. Co. Rd 875N., Seymour, eceleni komgwaqo kukhiqizwa isitendi.
Imakethe Yepulazi likaVanAntwerp
11181 N. US 31, Seymour, 812-521-9125, eceleni komgwaqo isitendi sokukhiqiza.
Le makethe ibuye ibe nokuma komgwaqo kuWest Tipton Street.
ILot Hill Dairy Farm
Ipulazi lobisi lomndeni, elenza ushizi onhlobonhlobo kufaka phakathi ushizi osakazekayo kanye nobisi olumhlophe noshokoledi. IGelato iyatholakala ngezinhlobonhlobo zokunambitheka… konke kwenziwa ngobisi oluvela emfuyweni yabo yezinkomo zobisi. Izinto zithengiswa ezimakethe zasemapulazini zasendaweni kanye nasesitolo samapulazi endaweni yabo.
IPlumer neBowers Farmstead
Leli pulazi lomndeni ofanayo le-1886 liguquka lisuka ekusebenzeni kwezitshalo ezilandelanayo ezijwayelekile libe ngumshini wokukhiqiza wemvelo onamandla wonke. Izimpahla zeFarmstead ezitholakalayo zifaka phakathi ukudla okwenziwe ngotshani, inyama yenkomo eqediwe ngotshani, amaqanda amadlelo, ufulawa ophelele kakolweni nama-popcorn.
I-Aquapon iyi-greenhouse yendawo. Leli pulazi linikeza imifino ne-tilapia ezitolo zendawo, amabhizinisi namakhasimende.
Ipulazi iRolling Hills Lavender
Leli pulazi liziqhayisa ngokukhula kwekhwalithi ekhulayo ne-munstead lavender epulazini lomndeni eCortland, IN. Iphupho le-lavender agritourism laqala ngonyaka we-2018 futhi manje umhlaba wabo usekhaya lezitshalo ezingaphezu kuka-2,000 2020 ze-lavender. Ngo-XNUMX, izinyanda zizotholakala ukuze zithengwe.
Izitolo zewayini / izindawo zokuphekela utshwala
I-Chateau de Pique Winery ne-Brewery
IChateau de Pique ifaka igumbi lokunambitha nendawo yokwamukela endaweni ebanzi yentaba. Igumbi lokunambitha linikeza iwayini lamahhala linambitha izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Amahektha amathathu womabili wamagilebhisi amhlophe nabomvu anendawo leyo futhi uhlu lwamawayini lunezinhlobo ezingama-25, ezisukela eRiesling kuye kumaSemi-Sweets kuye kumaPorts Sweet. Futhi ungakhohlwa ukuzama ubhiya kaChateau de Pique ngesikhathi esizayo lapho uvakashela! IChateau de Pique nayo inezitolo zesathelayithi esifundeni.
IChateau de Pique itholakala ku-6361 North County Road 760 East, Seymour, 812-522-9296.
ISalt Creek Winery yaqala ngonyaka we-2010 njengendlela yokuzilibazisa yomndeni wakwaLee. I-winery itholakala emagqumeni aseSouthern Indiana nasemngceleni weHoosier National Forest. Kanye newayini lamagilebhisi, abakwaLee bakhiqiza amawayini avela kuma-blueberries, ama-strawberry, ama-cherries, amapheya, ama-plums kanye namajikijolo asendle. ISalt Creek Winery ikhiqiza i-merlot, i-cabernet sauvignon, i-chambourcin, i-Riesling, ukubomvu kokushona kwelanga, i-blackberry, i-classic emhlophe, i-blackberry yasendle, iplamu, i-blueberry, imango, ipentshisi, umaskoni, obomvu obumnandi, obumnandi obumnandi, i-Catawba ne-raspberry ebomvu.
ISalt Creek Winery itholakala ku-7603 West County Road 925 North eFreetown. 812-497-0254.
I-Seymour Brewing Company yi-brewpub yokuqala yokusebenza ye-Seymour. Yima bese uzama uphenti noma ugcwalise i-growler yakho. Umculo obukhoma obanjwa ngezikhathi ezithile ku-brewpub futhi, lapho isimo sezulu simnandi, jabulela izingoma lapho kuhlangana khona iHarmony Park. Isheduli ephelele yabaculi ivela ehlobo. Izinhlobonhlobo zobhiya zisempompini. Kutholakala eBrooklyn Pizza Company.
I-Seymour Brewing Company itholakala ku-753 West Second Street, eSeymour. 812-524-8888.
Yakhiwe ngaphansi kwe-Works Projects Administration (WPA) ngasekupheleni kweminyaka yama-1930, lesi sikhungo samanzi afudumele sinamachibi akhulisa ubumba ayi-9 kanye nedamu elilodwa lokubamba izinkukhu. Amachibi okukhulisa avela ku-1 kuya ku-0.6 acres ngosayizi futhi anikezela ngamahektare angama-2.0 wokukhulisa izinhlanzi. Lesi sikhungo siphakamisa ama-bass angama-11.6 ama-intshi amabili, ama-bassmouth bass amakhulu ama-intshi ama-intshi angama-intshi amane kanye nama-catfish angama-250,000 20,000 ngonyaka, asetshenziselwa ukugcina amanzi omphakathi amaningi ase-Indiana.
(kuhlinzekwe yi-Indiana DNR)
IDriftwood State Fish Hatchery itholakala ku-4931 South County Road 250 West, eVallonia, 812-358-4110.
IVallonia Nursery, Uphiko lwamaHlathi
Umsebenzi we-nursery ukukhulisa nokusabalalisa izinto ezisezingeni eliphakeme zezitshalo zokutshala zokonga kubanikazi bomhlaba base-Indiana. Izithombo eziyizigidi ezine nengxenye zitshalwa minyaka yonke kusuka ezinhlotsheni ezingama-60 ezahlukahlukene. Isikhungo samahektare angama-250 sikhiqiza ama-conifers nezinkuni ezilukhuni.
IVallonia Nursery, Division of Forestry itholakala ku-2782 West County Road 540 South eVallonia. 812-358-3621
Kusukela ebuntwaneni, uGeorge Schneider, wayenesifiso esisodwa – ukutshala izihlahla ukukhulisa ubuhle bendawo ayizungezile. UGeorge waqala ukutshala izihlahla nezihlahlana endaweni encane ayiboleka endaweni yezinkukhu yabazali bakhe futhi wakhiqiza ipulazi.
Ngemuva kwesikole samabanga aphakeme, uGeorge washada noMae Ellen Snyder. Yena nonkosikazi wakhe omusha bathenga amahektare angama-24 epulazini lomndeni base besungula indawo yokuthengisa izingane-iSchneider Nursery.
Njengamanje, i-nursery yakhiwe ngaphezu kwamahektare angama-500 omhlaba futhi iyinkulisa enkulu kunazo zonke eSouthern Indiana. AbakwaSchneider bathengisa izitshalo zokulungisa ingadi nezingadi kubo bobabili abathengi abathengisayo nabathengisa.
ISchneider Nursery, Inc. itholakala 3066 East US 50, Seymour. 812.522.4068.